မတော်တမ ဖုန်းရေစို သွားရင် ဆန်အိုးထဲ သွားထည့်တာ လုံးဝမှားပါတယ်၊ အမှန်က ဒီလို လုပ်သင့်ပါတယ် – Nyi Ma Lay
မတော်တမ ဖုန်းရေစို သွားရင် ဆန်အိုးထဲ သွားထည့်တာ လုံးဝမှားပါတယ်၊ အမှန်က ဒီလို လုပ်သင့်ပါတယ်
By Nyi Ma LayPosted on May 31, 2021 May 31, 2021
ဖုနျး ရစေိုတယျဆိုတာ ဖုနျးနဲ့မကငျးသူတိုငျး ကွုံတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ မ တျောတဆ ရထေဲကို ပွုတျကတြဲ့အလအေ့ထကို အားလုံးနီးပါး ကွုံခဲ့ရဖူးမှာပါ။ တ ခါလေ အပွငျထှကျရာ ထီးမပါလို့ မိုးရစေိုတာတှေ၊ မိုးရစေငျနိုငျတဲ့နရောမှာ ဖုနျးကို ထားမိတာမြိုးတှလေညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
ဘယျ လိုပဲဖွဈဖွဈ ဖုနျးရစေိုတဲ့အခါမှာ လုပျမိလရှေိ့တဲ့ အမှားတှနေဲ့၊ တကယျ ပွုလုပျသငျ့တဲ့ အခကျြတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) ရစေိုဖုနျးကို ဆနျထဲမှာထညျ့ထားတာဟာ မှနျသလား
ဆနျဟာ သာမနျအားဖွငျ့ ရငှေကေို့ ဖယျထုတျနိုငျတယျဆိုတာ မှနျသျောလညျး ထငျထားသလောကျ မမွနျဆနျပါဘူး။ ဆနျထဲကိုဖုနျးကို ထားရှိခွငျးရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိူးတှကေတော့ ဖုနျးရဲ့ အပေါကျမြိုးစုံကနေ ဆနျရဲ့အမှုနျတှေ၊ ဆနျကြိုးတှေ ဝငျလာနိုငျပါတယျ။
ဒါဖွငျ့ ဘာလုပျရမလဲ …?
(၂) အရငျဆုံး လုပျရမှာကတော့ ပါဝါကို ပိတျလိုကျပါ။
ဒီလိုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ အတှငျးထဲမှာ ရှော့ဖွဈတာကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ နောကျအခွောကျခံစကျကို အရမျးမပူတဲ့အနအေထားနဲ့ ဖုနျးထဲကရကေို ခွောကျနိုငျသမြှ မွနျမွနျခွောကျအောငျ လုပျပေးရပါမယျ။
ဝပျ(၆၀)မီးသီးလိုရှိရငျလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ ဒီနညျးက ဖုနျးထဲကို အမှုနျတှလေညျး မဝငျပါဘူး။
(၃) နောကျ လုပျသငျ့တာကတော့ ဖုနျးရစေိုပွီဆိုတာနဲ့ အရငျဆုံး ပါဝါပိတျ၊
ယငျးနောကျ စက်ကူတဈရှုးနဲ့ ရတှေကေို အမွနျခွောကျအောငျသုတျတာ ထိရောကျပါတယျ။ ဘကျထရီထုတျလို့ရတဲ့ဖုနျးဆို ပါဝါမပိတျခငျ ဘကျထရီကို အမွနျဖယျထုတျလိုကျတာ ပိုမှနျပါတယျ။ တဈရှုးနဲ့စိမျပွနေပွေ ရသလောကျသုတျခွငျးအားဖွငျ့ ဖုနျးအခွောကျခံတဲ့အခါ မွနျဆနျစပေါတယျ။
(၄) နောကျတဈခု လုပျသငျ့တာကတော့ ဖုနျးထဲကနေ ထုတျလို့ရတဲ့ အရာမှနျသမြှ ထုတျရပါမယျ။
မနျမိုရီကတျတှေ၊ ဆငျးမျကတျတှေ၊ စသဖွငျ့ ထုတျပွီးနောကျ၊ ယငျးတို့ကိုလညျး သီးခွားအခွောကျခံတာပဲဖွဈဖွဈ ရစေငျအောငျ ဂရုတစိုကျသုတျတာပဲဖွဈဖွဈ အရေးတကွီးလုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။ သတိထား ရမှာက တဈရှုးအပိုငျးအစတှေ ဖုနျးရဲ့အပေါကျတှထေဲကနေ မဝငျပါစနေဲ့။
(၅) ဖုနျးခွောကျသှားပွီလို့ အထငျရှိတဲ့အခါ သငျ့အနနေဲ့ ခွောကျသှတေဲ့ သဘကျတဈခုပျေါမှာထားပွီး နရေောငျခပျပွပွလေး လှနျးထားသငျ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျ Air dry နဲ့ ဆယျမိနဈတဈခါလောကျ အပျေါအောကျလှနျပွီး မှုတျပေးရပါမယျ။ ဖုနျးကို ရအေစိုဓာတျကုနျပွီအထငျနဲ့ ခကျြခငျြးပါဝငျမဖှငျ့ပါနဲ့။ အနညျးဆုံး (၂၄)နာရီကနေ (၃၆)နာရီ ဒီအတိုငျး Air dry လေးနဲ့ ပုံမှနျနီးပါးလောကျ မှုတျပေးနသေငျ့ပါတယျ။
ဖုန်း ရေစိုတယ်ဆိုတာ ဖုန်းနဲ့မကင်းသူတိုင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မ တော်တဆ ရေထဲကို ပြုတ်ကျတဲ့အလေ့အထကို အားလုံးနီးပါး ကြုံခဲ့ရဖူးမှာပါ။ တ ခါလေ အပြင်ထွက်ရာ ထီးမပါလို့ မိုးရေစိုတာတွေ၊ မိုးရေစင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ဖုန်းကို ထားမိတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘယ် လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းရေစိုတဲ့အခါမှာ လုပ်မိလေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေနဲ့၊ တကယ် ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆန်ဟာ သာမန်အားဖြင့် ရေငွေ့ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်သော်လည်း ထင်ထားသလောက် မမြန်ဆန်ပါဘူး။ ဆန်ထဲကိုဖုန်းကို ထားရှိခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးတွေကတော့ ဖုန်းရဲ့ အပေါက်မျိုးစုံကနေ ဆန်ရဲ့အမှုန်တွေ၊ ဆန်ကျိုးတွေ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါဖြင့် ဘာလုပ်ရမလဲ …?
(၂) အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာကတော့ ပါဝါကို ပိတ်လိုက်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အတွင်းထဲမှာ ရှော့ဖြစ်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်အခြောက်ခံစက်ကို အရမ်းမပူတဲ့အနေအထားနဲ့ ဖုန်းထဲကရေကို ခြောက်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ခြောက်အောင် လုပ်ပေးရပါမယ်။
ဝပ်(၆၀)မီးသီးလိုရှိရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီနည်းက ဖုန်းထဲကို အမှုန်တွေလည်း မဝင်ပါဘူး။
(၃) နောက် လုပ်သင့်တာကတော့ ဖုန်းရေစိုပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံး ပါဝါပိတ်၊
ယင်းနောက် စက္ကူတစ်ရှုးနဲ့ ရေတွေကို အမြန်ခြောက်အောင်သုတ်တာ ထိရောက်ပါတယ်။ ဘက်ထရီထုတ်လို့ရတဲ့ဖုန်းဆို ပါဝါမပိတ်ခင် ဘက်ထရီကို အမြန်ဖယ်ထုတ်လိုက်တာ ပိုမှန်ပါတယ်။ တစ်ရှုးနဲ့စိမ်ပြေနပြေ ရသလောက်သုတ်ခြင်းအားဖြင့် ဖုန်းအခြောက်ခံတဲ့အခါ မြန်ဆန်စေပါတယ်။
(၄) နောက်တစ်ခု လုပ်သင့်တာကတော့ ဖုန်းထဲကနေ ထုတ်လို့ရတဲ့ အရာမှန်သမျှ ထုတ်ရပါမယ်။
မန်မိုရီကတ်တွေ၊ ဆင်းမ်ကတ်တွေ၊ စသဖြင့် ထုတ်ပြီးနောက်၊ ယင်းတို့ကိုလည်း သီးခြားအခြောက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေစင်အောင် ဂရုတစိုက်သုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ သတိထား ရမှာက တစ်ရှုးအပိုင်းအစတွေ ဖုန်းရဲ့အပေါက်တွေထဲကနေ မဝင်ပါစေနဲ့။
(၅) ဖုန်းခြောက်သွားပြီလို့ အထင်ရှိတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့ သဘက်တစ်ခုပေါ်မှာထားပြီး နေရောင်ခပ်ပြပြလေး လှန်းထားသင့်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် Air dry နဲ့ ဆယ်မိနစ်တစ်ခါလောက် အပေါ်အောက်လှန်ပြီး မှုတ်ပေးရပါမယ်။ ဖုန်းကို ရေအစိုဓာတ်ကုန်ပြီအထင်နဲ့ ချက်ချင်းပါဝင်မဖွင့်ပါနဲ့။ အနည်းဆုံး (၂၄)နာရီကနေ (၃၆)နာရီ ဒီအတိုင်း Air dry လေးနဲ့ ပုံမှန်နီးပါးလောက် မှုတ်ပေးနေသင့်ပါတယ်။
Previous post ဒျေါလာ သငေ်ျကတ “ $ ” စတငျ ဖွဈပျေါလာခဲ့တဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျ သမိုငျးကွောငျး
Next post ရောဂါခံစားနရေ တာခငျြး အတူတူ ကိုယျ့အသကျကို အဆုံးရှုံးခံပွီး ညီမဖွဈသူကိုသာ ကယျတငျပေးဖို့တောငျးဆိုခဲ့တဲ့7နှဈအရှယျ ကလေးမလေး